पुनमलाई कु-टपिट गरेको आरोप लागेका सामले शेयर गरे यस्तो तस्विर! - Bigul News
पुनमलाई कु-टपिट गरेको आरोप लागेका सामले शेयर गरे यस्तो तस्विर!
असोज ११, २०७७ SLPA
अभिनेत्री तथा मोडल पूनम पांडेको श्रीमान साम बोम्बे एक पटक फेरी चर्चामा छन्। केहि दिन अघि पूनम पांडे चर्चामा आएकी थिइन्। उनले आफ्नै श्रीमानले आफुलाई कु-टपिट र ध-म्की गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यस्ती मात्रै नभई अभिनेत्रीले साम विरुद्द गोवा पुलिसमा उजुरी दिएकी थिइन्। यो सबै हुँदा हुदै पनि अहिले साम बोम्बेले सोशल मिडियामा पूनम पांडेसँग फोटो हालेका छन्।
सामले आफ्नो आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंटमा आफ्नो बिहेको तस्विर शेयर गरेका छन्। यस तस्विरमा उनी पूनम पांडेसँग रहेका छन्। यधपी साम बोम्बेले यस तस्विरमा क्यापशन भने केहि लेखेका छैनन् । पूनम पांडेले गत १० सेप्टेम्बरमा प्रेमी सामसँग बिहे गरेकी थिइन् र साम विरुद्द २३ सेप्टेम्बरमा घरेलू हिं-साको आरोप लगाएकी थिइन्।
हनीमूनमा गएकी पूनम पांडेले उनको श्रीमान साम विरूद निवेदन दिएकी थिइन्। पुलिसले सामलाई गिरफ्तार पनि गरे। पछि पूनमले यो घटनापछि बिहे तोड्ने फैसला लिएकी थिइन्। एक इन्टरभिउमा पूनम पांडेले भनेकी थिइन कि, ‘अघिल्लो डेढ वर्षदेखि सामले मलाई कु-टिरहेको छ। मलाई लागेको थियो कि बिहे पछि सबै ठिक हुन्छ तर यस्तो भएन। मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो। साम एक पटक यति कुटे कि मेरो ब्रेन हयाम्रेज भएको थियो। म कैयौँ दिन अस्पतालमा भर्ती पनि भएकी थिए। मेरो अनुहारमा र शरीरमा धेरै निशान थियो। सामले आफ्नो इंस्टाग्रामबाट मेरो सबै तस्विर डिलेट गरे जबकी मैले केहि गरिन किनकी मलाई लाग्थ्यो कि सबै ठिक हुन्छ।’
प्रकाशित : आइतबार, असोज ११, २०७७१२:४६